Refund mutemo - Popular Jewelry
Returns (ONLINE CHETE)
Yedu mutemo inotora kwemazuva gumi nemashanu mushure mezuva rekutumirwa. Kana mazuva gumi nemashanu apfuura kubvira patakatumira pasuru yako, hatigone kudzosera kana kuchinjana.
Kuti uve unokodzera kudzoka, chinhu chako chinofanirwa kusashandiswa uye chiri muchimiro chakafanana icho iwe chawakagamuchira imomo. Iyo yepakutanga kurongedza pamwe nechero zvinowiririka zvidimbu (kana zvichibvira) zvinofanirwa kuverengerwa.
Kamwe kudzoka kwako kwakatenderwa, yako yekudzoserwa ichagadziriswa uye kiredhiti ichazongoerekana yaiswa kune yako yekutanga nzira yekubhadhara. Ndokumbira utendere mazuva mashoma ekuti kudzorerwa kuitwe.
Iwe unenge uine mutoro wekutumira mari yakawedzerwa yekudzoka. Kutumira mari panguva yekutenga hazvibhadharwe (kana mari yekubhadharisa yakapihwa rubatsiro kuburikidza neyedu yemahara yekutumira sarudzo iyi mutengo unowanzo kuve usingaonekwe kwauri; mutengi anozoziviswa nezve kudzikiswa kusati kwadzoserwa.)
Kana isu tikakupa iyo yekutumira chitaridzi, mutengo wekudzorera kutumira uchabviswa kubva kune yako kudzoreredza.
Kana iwe uri kutumira chinhu chakakosha kudarika $ 50 funga kushandisa inoteedzereka sevhisi yekutakura uye kutenga inishuwarenzi yepakeji yako. Hatigone kuvimbisa kuti isu tichagamuchira yako kudzoka. Iwe unogona kukumbira kwatiri kuti tipe chitambi neinonzi inishuwarenzi (ona pamusoro pamusoro pekutorerwa kwepositi kubva kune yako yekudzosera.)